အင်တာမီလန်တို့ အန်ဖီးလ်မှာ အိမ်ရှင်ကို အနိုင်ယူ ကျော်ဖြတ်သွားဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလား ??? - MySport Myanmar
အင်တာမီလန်တို့ အန်ဖီးလ်မှာ အိမ်ရှင်ကို အနိုင်ယူ ကျော်ဖြတ်သွားဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလား ???
အီတလီနိုင်ငံ မီလန်မြို့က ဆန်စီရိုဘောလုံးကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက် (၁၆)သင်းအဆင့် ပထမအကျော့ပွဲစဉ်မှာ အိမ်ရှင်အင်တာမီလန်အသင်းက ဧည့်သည်လီဗာပူးလ်အသင်းကို (၂)ဂိုးပြတ်နဲ့ အရေးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် နောက်တစ်ဆင့် တတ်ရေးအတွက် တကယ်ကို ခက်ခဲသွားခဲ့ရပြီး ဒုတိယအကျော့အဖြစ် အန်ဖီးလ်မှာ ကစားရမယ့် ပွဲစဉ်မှာလည်း အိမ်ရှင်လီဗာပူးလ်ကို ပြန်လည်အနိုင်ယူဖို့ဆိုတာပါ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းသွားခဲ့ရပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဘောလုံးအားကစားမှာ မမျှော်လင့်ထားတာတွေ ဖြစ်တယ်တယ် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ထားတာတွေ ထဖြစ်တတ်တယ် ဆိုပေမယ့်လည်း ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ဆီ တတ်လှမ်းဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး အခြေအနေမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့ လီဗာပူးလ်ဘက်က ဒီအခြေအနေကို အမှားခံမှာ မဟုတ်တဲ့အပြင် သူတို့ရဲ့ ကစားအားကိုပါ လျှော့မချပဲ အန်ဖီးလ်မှာ နိုင်ပွဲထပ်ရအောင်ပါ ကြိုးပမ်းဖွယ် ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အင်တာမီလန်ကလည်း ချန်ပီယံလိဂ်မှာ လီဗာပူးလ်ကို ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်း (၃)ပွဲဆက်တိုက်အထိ နိုင်ပွဲတွေ ပျောက်ဆုံးထားခဲ့ရပြီး ဆလာနီတာနာအသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ ပွဲစဉ်မှာသာ (၅)ဂိုးပြတ်နဲ့ အနိုင်ရထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီအတွင်း သူတို့ရဲ့ အိမ်ကွင်းအန်ဖီးလ်မှာ လက်ခံကစားခဲ့ရတဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံ ပွဲစဉ်တိုင်းမှာ လုံးဝကို ရှုံးပွဲမရှိအောင် ကစားထားနိုင်ခဲ့ခြင်းပါ။ ချယ်လ်ဆီး မန်စီးတီး ဘရိုက်တန်နဲ့ အာဆင်နယ်တို့ကိုသာ သရေကျအောင် ကစားထားခဲ့ပြီး ကျန်တဲ့ပွဲတွေအားလုံးကို အနိုင်ယူထားခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်း Form ကို အင်တာမီလန်တို့ တွန်းလှန်ပစ်ဖို့ဆိုတာ အလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ လီဗာပူးလ်ရဲ့ အိမ်ကွင်း Form နဲ့ အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ အဝေးကွင်း Form က ဆန့်ကျင်ဘတ် အခြေအနေ ဖြစ်နေရပြီး နောက်ဆုံးကစားထားခဲ့တဲ့ အဝေးကွင်း(၆)ပွဲမှာ နိုင်ပွဲက တစ်ပွဲသာ ရှိခဲ့ပြီး (၄)ပွဲသရေ (၁)ပွဲရှုံးထားခဲ့ရပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ အဝေးဂိုးစည်းမျဉ်းတွေ မရှိတော့လို့ အိမ်ကွင်းမှာ အရေးနိမ့်ထားရတဲ့ အင်တာမီလန်အတွက် ဒုတိယအကျော့မှာ အခွင့်အရေး ရှိနိုင်သေးတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပေမယ့် အန်ဖီးလ်မှာ လီဗာပူးလ်ကို (၂)ဂိုးသွင်းယူပြီး ခံစစ်ကလည်း တစ်ဂိုးမှ ခွင့်မပြုရအောင် ကစားနိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ အန်ဖီးလ်မှာတော့ အင်တာတို့ အမြင့်ဆုံး သရေရလဒ်လောက်သာ မျှော်လင့်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အိမ်ရှင်တို့ပဲ ကွာတားကို တတ်လှမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။
MySport Myanmar2022-03-08T17:02:31+06:30March 8th, 2022|All Posts, Champions League, Football|